NOS neRTL vanopa kutarisisa kuzere kwakadzika kudzikisa zvigadzirwa zvavo zvakadzika: Martin Vrijland
NOS uye RTL inopa kutarisisa kuzere kwakadzika kudzikisa zvigadzirwa zvavo zvakadzama
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we9 September 2019	• 11 Comments
Mumazuva achangopfuura, zvese RTL neNOS zvakave nekutarisa kuzere kweichiitiko chakadzika. Isu tinoona zvakafanana chiitiko pano sepane chinyorwa che 'fake nhau'. Vagadziri vakuru venhau dzenhema uye vashandisi vakanyanya vekuita zvakadzama tekinoroji vari kuenda kunotsausa kutarisa kubva kwavari nekutaura kuti masangano ematsotsi, magandanga kana Russia ndivo vanoishandisa. Uye zvirokwazvo DARPA (iyo Defense Yakatanga Kutsvagisa Projenti Agency inishuwarenzi yeUS Department of Defense) kuvandudza tekinoroji Ndiani anoziva uye anoziva mafirimu echokwadi, kuti nhepfenyuro huru inogona kugara ichivimba neiyo mhando yemhando. Tora mufananidzo?
Ndiani ane mari yese uye zviwanikwa zvekutamba vanhu nezvakadzika? Ko nezve shamwari yedu hombe John de Mol nemabhiriyoni ake? Mhuri yekwaMol inenge ine mari uye zviwanikwa zvekuzvipa mufananidzo unotonhorera kuburikidza naJohnny anopanduka uye Linda anofara. Zvichakadaro, John de Mol ndiye muridzi weAlgemeen Nederlands Persbureau.
John D. Rockefeller paakava bhirioni wekutanga kuUS nekambani yake yemafuta, akashandisa mugadziri wemufirimu kuratidza kuti aiparadzira mari mumugwagwa. Rockefeller akazvishandura kubva muhomwe inovengwa muhombodo kuva inodiwa philanthropist. Iyi inguva yekuti usvinudze meso ako uone mafambiro anoita hura uye hwunocherwa nemisanji pasi pesimba rekuvapo kwedu. Iwe urikuitwa muunganidzwa Trumanshow nevezvenhau, nezvandaratidza pano pawebhusaiti mune akati wandei mamiriro kuti vanomisa kusungwa pamberi pekamera uye kumisikidza bongozozo rizere nerubatsiro rwepamoyo kutungamira kuratidza icho munhau manheru (ona pano en pano. Uye ivo vanogadzira nhau havaizotinyengedza pazvose zvakashata? Nei iwe uchifunga kuti Jeroen Pauw naMatijs van Nieuwkerk etc. vane mari dzakakwira zvakadaro? Nekuti ivo vari nhamba 1 vatambi vekunzwisisa kwako kwenyika. Vashanyi vetafura vakatenderwa vanobvumidzwa kuzadza kuratidzika kwekukurukurirana uye kushoropodza, kuitira kuti iwe utende kuti "chaizvo chinhu chiri kuitika". Uchapusa.
Izvo zvakakosha kuti iwe utange kuona kuti media haina kungoburitsa nhau fake, asiwo shanda neakadzika fekinoroji. Ivo vanoedza kutsausa kutarisisa kwako kubva pachavo nematambudziko akadai sokupamba kana mavhidhiyo ezvinyadzo naDionne Stax. Izvo zvese zvinokonzeresa kunetsekana uye ndicho chinangwa, nekuti iwe unofanirwa kuve wakanyanya hanya nezve 'matsotsi' kuitira kuti hurumende idzorere kudzora kwemabasa ayo ezviparwa mhosva kuti iwane mukana wayo. "Dambudziko, Reaction, Solutioninonzi iya iya. Ipapo iwe unogadzira dambudziko iro nzanga inofanirwa kuve nehanya nazvo; ipapo iwe unomutsa kupindura kwemanzwiro kuburikidza nevanhu vakaita saJeruen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk nevamwe vese vemaneja ekuona; tozopa mhinduro yacho. "Unogona chete kuvimba nemifananidzo inouya kubva kumahara midhiya nenhepfenyuro yakatenderwa," ndiyo meseji. Iye anotengesa mataira anoparadzira zvipikiri mumigwagwa yekuwanika, kuti iwe uende kune mutengesi wetairi kune mhinduro.
Iyo Public Prosecution Service (OM) iri kunetsekana nezve mukana wekushusha anonzi mafirimu akadzika, ane iyo mifananidzo inoshandiswamo ne algorithms. Izvi zvinonyora iwo NOS Mugovera.
Muchuchisi weruzhinji, Lodewijk van Zwieten, anoti kune NOS kuve nehanya nezve zororo uye rakadzika rinogona kuitwa mavhidhiyo. “Tinofanira kuziva kuti kana tikawona chimwe chinhu, hatichakwanisa kuzvitenda. Munguva pfupi inotevera unogona kuona zvinhu zvisiri izvo zvisati zvaitika chaizvo. ”
Verenga mukati, pakati pezvimwe zvinhu ichi chinyorwa (uye pano en pano) sei kudzika kwemvura kwakadzika kwemakore uye kuti maficha emagariro evanhu anowanzo kuvharirwa sei neakadzika, kuitira kuti hurumende ive neayo telemarketing kana vashandi vepamusha vatarise nhaurirano dzezvemagariro evanhu, dzakavanzika kumashure dzakatendeka profiles ine network yechokwadi uye mapikicha akatendeka nemavhidhiyo. Chaizvoizvo verenga! Uye funga zvakadzama nezve kutsigira munyori uyo anonamira mutsipa wake kuti aunze izvi zvese. Iva nhengo kana kujoina imwe imwe nguva-mupiro uye igovera zvinyorwa zvakanyanya sezvazvinogona. Thanks pamberi.
Source chinyorwa listings: ramangwana, showieuws.nl
Yolanthe Cabau nemapurisa akateerana neDNA, inoyevedza John de Mol kugadzirwa (sezvakaita nhau ye ANP)
Tags: deepfakes, Dionne, nyepera, Featured, john de mol, Lodewijk van Zwieten, nhau dzakaipa, nhau, OM, zvinonyadzisira, Stax
9 September 2019 pa 12: 52
Usawire kunhaurirano pamaforamu kana mumagariro enhau. Iwe unogona kazhinji kutaura kune fake profile (yakadzika) yakahwanda mumiriri wenyika.
10 September 2019 pa 08: 30
Ini ndinofunga DDS muenzaniso wezvinyorwa izvo! Usati wazviziva, iwe uri mukukurukurirana kwekudyara kunhuwa kunge gomba remboro!
9 September 2019 pa 14: 30
banga iri zvakare rinocheka pamativi maviri, zvakare zvinoita kuti vanhu vafungidzire zvingazoitika mune ramangwana. Semuenzaniso, mifananidzo yakavhiringidzwa yezvematongerwo enyika yakakurumbira, vatambi, etc. apo munhu anogona kuisa chinyorwa chekudzika shure
10 September 2019 pa 08: 32
Ini ndotya kuti zvematongerwo enyika ndeye tsanangudzo yakadzika. Kuruboshwe kana kurudyi!
18 September 2019 pa 15: 21
chaizvo zvandaifunga ...
9 September 2019 pa 15: 37
Zvandinozvibvunza ndeizvi zvakadzama ... 😀
9 September 2019 pa 15: 40
9 September 2019 pa 18: 17
..this ingori nyaya yekutarisa zvakadzika mukati megirazi. Ndiani achiri kutarisa nos / rtl?
10 September 2019 pa 08: 22
Ini handina zvakadaro (zvakare) naFlits West, asi kunze kwekumwe kutanha akange ave padanho! Kune mamwe ese: Sambal kuFlits?!
10 September 2019 pa 08: 28
Ini ndiri kunyanya kufarira kana muhomwe mafirita kubva kuOranje achizoenda aine mairi mavovoice zvine chekuita nekugadziriswa uye kugadziriswazve, nezvimwewo, uye iko kumberi kwekubvumidza kweisingabatsiri Orange brood! Chero Rutte anoti, fake kana kuti kwete, iri gemu # 1 munzvimbo. Uye chakaipisisa ndechekuti: Anopora nazvo!
10 September 2019 pa 08: 36
Ingo rangarira kuti Tete Bea van Oranje vakasunga mabhora aRutte kukwira bhiza. Saka, saka!
« Boris Johnson (madzitateguru aOttoman) anogona kutanga nyonganiso muEurope iyo ichasimudza Humambo hweOttoman?
US ichabhadhara rini mamiriro ekunze pamabhomba iwaya avanokanda? »
Kushanya kwakazara: 4.288.642
ongorora op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2
RCS op Wakarasikirwa nehondo? Kana isu tichanyatsomuka uye kutora chiito?
ClairVoyance op Coronavirus, huswa infestations uye zvimwe zviitiko zvechiporofita zviri kuitika
Marcos op Wakarasikirwa nehondo? Kana isu tichanyatsomuka uye kutora chiito?